IZiko ledatha laseIreland leXesha elizayo, lisesemoyeni, lixhaswe ngabantu abangaphezulu kwama-300 | Ndisuka mac
Ngelixa iDenmark ivuyiswa bubomi ngeziko ledatha elitsha bavula nje kwaye izicwangciso ze-Apple zexesha elizayo zokudala entsha, i-Ireland ihlala iyintloko ye-Apple kunye nokuchitha kwemali okuqhubekayo. Kule mpelaveki iphelileyo, ngaphezulu kwama-300 abantu abaququzelele i-rally yokuxhasa iziko ledatha i-Apple eliceba ukuyivula e-Athenry, kwiphondo laseGalway, iziko ledatha eliza kuxabisa malunga ne-850 yezigidi zeerandi. Eli ziko ledatha lalinelayisensi ngaphezulu kweminyaka emibini eyadlulayo, kodwa ulwakhiwo luye lwalibaziseka ngenxa yeengxaki eziqhubekayo inkampani ejongene nazo nabahlali baloo dolophu.
Eli ziko ledatha litsha liya kuba lijongana nokulawula iApple Music, iVenkile yeApple, iMiyalezo, iimephu zeApple kunye neSiri, ukongeza ekunikezeleni ngemisebenzi emininzi ngexesha lokwakhiwa kwayo naxa isebenza. Iziko ledatha, ekuthiwa linokusetyenziswa kwamandla aphezulu kuneDublin, liya kuba nefuthe kwindalo esingqongileyo kumalulwane nakwiibadi, iintlobo ezikhuselweyo kuloo ndawo. Oko bekuhlala kunjalo Eyona ngxaki iphambili athe wajongana nayo uApple ukuqala imisebenzi.
Kwindibano nakwimatshi elandelayo ebibanjelwe kule mpelaveki iphelileyo edolophini, abahlali baxelelwe ukuba le misebenzi iza kuqesha malunga nabantu abangama-300 kwaye kamva malunga nama-150 abasebenzi abangakumbi abaya kujongana nokugcina izibonelelo. Isigqibo sokugqibela siza kuza kule veki, isigqibo esinokunyanzela i-Apple ukuba ifumane indawo entsha yeziko ledatha. Oko u-Apple waqala ukuhlala eIreland kwii-80s, Inani labasebenzi beenkampani likhule ukusuka kwi-100 ukuya ngaphezulu kwe-4.000 e-Ireland kuphela.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » Iziko ledatha elizayo laseIreland, elisesemoyeni, lixhaswa ngabantu abangaphezulu kwama-300
I-Feral Interactive ibhengeza ukufika komdlalo we-DiRT Rally ye-macOS